Tag: famolavolana atiny | Martech Zone
Tag: famolavolana atiny
Aza mety ho Punk, ho Hunk ary Chunk ny atiny
Alahady 22 aprily 2007 Asabotsy 20 Febroary 2016 Douglas Karr
Izany stunk, miala tsiny! Antenaina fa nahasarika ny sainao izany. Dan Zarrella dia manana hafatra tsara amin'ny fametahana ny atiny. Averiko ny sasany amin'ireo toroheviny ary manipy ahy manokana. Chunkless: Betsaka ny fikarohana momba ny fitondran-tenan'ny mpitsidika tranonkala sy ny fomba famakian'izy ireo sy hamakivakiana lahatsoratra sy pejy ao anaty tranonkala iray. Fomba mahazatra ho an'ireo mpitsidika tranonkala ny mamaky angona na lohateny anaty sakana fa tsy mamaky